Cnc Chikamu Oem, Sheet Metal Zvikamu, Zvikamu Zvemuchina Zvinodiwa - Daohong
Welcome to Daohong - CNC machine, akatendeuka uye azvikuya kugadzira Parts China.
Iyo kambani inotarisana neR & D, kugadzirwa uye kutengeswa kwezvigadzirwa munzvimbo nhatu huru, kusanganisira One-stop nyanzvi simbi zvikamu senge CNC zvikamu zvebasa, machining zvikamu sevhisi, kukuya sevhisi uye kutapudza zvikamu sevhisi, zvikamu zvekunze senge surf leash, surf leash swivel uye zvimwe zvekushambadzira zvishongedzo uye Consumer Electronics zvikamu senge TV gomo, yakamira tafura.
Nedanho rehunhu hupenyu hwedu hunopa zvigadzirwa zvinogadziriswa zvinogonesa vashandisi kufara ".
Nechi chinangwa chehunhu hupenyu hwedu hunopa mhinduro dzakagadzirwa dzakagadzirwa dzinoita kuti vashandisi vafare
Hot Kutengesa Zvikamu
Kunze Kwemasuo Evhisi Service
Machining Zvikamu Service
Reavy Duty Swivel
1.Aluminium Raw Zvinyorwa
2.Size 38mm, 45mm Kana Yakasarudzika
3.Rudzi runogona kugadzirwa
15m uye 30m kudhizaina Reel
1.Zvigadzirwa zvedu zvakazara seti, 15m / 30m / 45m / 50m kana tsika yakasarudzika kureba mutsetse, 0.5m kutenderera mutsara.
2.Aluminium alloy reel.
Stainless simbi swivel.
4.316 Stainless simbi haka 90mm, plastiki bhokisi.
SUP Legrope yakananga
1.Tine marudzi akasiyana ekupakata maitiro esarudzo yako.
2.Iyo yekuisa saizi, kurongedza zvinhu, Packaging nzira.
3.Packaging anodhinda zvese zvinogona kuve tsika.
Bodyboard Yakasungwa Leashes
1.CORE: TPU Polyurethane zvinhu zveplashboard leash, yakasimba simba, kusimba kwakanaka uye yakajeka nzvimbo.
2.CUFF: Chidzitiro cheketuru chedu SUP leash chakagadzirwa zvakapfava zvakapetwa neoprene zvinhu, zvakanyanya kugadzikana.
3.SWIVEL: Yakagadzirwa nedoulbe isina simbi swivels.
4.RAIL SAVE: Inorema basa njanji saver inosungira tambo kune iyo surf board.
Spline mugodhi uye Gear mugodhi For Agricultural Machinery
1.Our spline shaft inoshandiswa gearbox, michina yekurima, michina yekudhinda, machira machira, kurongedza michina
2.Professional giya hwokugadzira rutsigiro;
3.OEM & ODM rutsigiro;
Ndinovimba uchafarira zvikamu zvedu zvemhando yepamusoro nemutengo wakanaka zvakanyanya.
Gear mugodhi Parts
Tsika Shaft Zvikamu
1.Professional kushambadzira timu yevatengi kudhirowa uye sampuli
2.More anopfuura 10years fekitori ruzivo mune magiya
3.Professional kushambadzira timu yevatengi kudhirowa uye sampuli
4.OEM & ODM rutsigiro;
Zvekurima Shaft Zvikamu
1.Factory yakananga kutengesa
2.Professional hwokugadzira rutsigiro;
3.High nemazvo shiviriro (diki shiviriro inogona kusvika: +/- 0.001mm)
Stainless simbi mugodhi ...
1.Tinogona kutema mune chero shaft kureba iwe yaunoda.
2.Tinogona kupa yakakosha kugadzirisa zvinodiwa zve shaft inoguma.
3.Tinogona kupa yakagadzirirwa basa re shaft dhayamita.
1. Fekitori yakananga kutengesa
2. Professional technical technical support;
3.Kukwirira nemazvo shiviriro (diki shiviriro inogona kusvika: +/- 0.001mm)
4. OEM & ODM rutsigiro;
5. Vimba iwe uchafarira zvikamu zvedu mhando yakanaka nemutengo wakanaka zvakanyanya.
Nyowani Dhizaini Kubata Swivel
Simba rakakura uye yakatenderera 360 degree kutenderera
1.Heavy Duty Stainless Simbi Swivels
2.No fouling kana kumonyanisa matambudziko
3.Inokodzera zviitiko zvekunze senge kudhizaivha, kufefetera, kukwira, kukwira, Bindu Rakarembera Bhasiketi nezvimwe
High yepamusoro 3-nzira Fis ...
1.Super simba uye inotsvedza 360 degree kutenderera
2.Heavy Duty Stainless Simbi Swivels
3.No fouling kana kumonyanisa matambudziko
4.Inokodzera zviitiko zvekunze senge kudhizaivha, kufefetera, kukwira, kukwira, Bindu Rakarembera Bhasiketi nezvimwe
Kubata Hove Swivel Zvikamu
DZINOSHANDISWA STEEL FISHING SWIVEL
1.We tine swivels kune ese ekutengeserana ehove kunyorera.
2.Our renji yemitsetse hove dzinosanganisa dzinosanganisira asi hadziganhurirwe kune dzakatungamira swivels, 8 mhando, kutenderera, bhokisi, crane, bazi uye rinorema basa nhamba 8 swivels
Bhora Kubereka Fishing S ...
1.Heavy Duty 316 Stainless Simbi Swivels
3.Weight ndeye 6.5 gramu, 880lb bvunzo
5.Material: 316 Stainless Simbi; Brass
316 Stainless simbi di ...
- Heavy Duty Stainless Simbi Swivels
- Hapana zvinokanganisa kana kumonyanisa matambudziko
Wholesale Yepamusoro Yemhando ...
1, Bhora rinotakura swivel
2, Masayizi: pane requst 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10.5mm 12mm
Nesu MARI YAKO mune zvakachengeteka, BHIZINISI rako RAKachengeteka.
Chibvumirano Chekushambadzira Chibvumirano & 5% dhisikaundi yevhiki yega yega kunonoka kuendesa nguva. Hotera yemahara panguva yekushanyira fekitori yedu 【NINGBO-JIANGSU】
Kuzvipira kusingachinjiki kune mhando. Unogona kutisvika nyore nyore chero nguva = >> maawa makumi maviri nemaviri ari online anowanikwa
Unyanzvi hwako uye dhizaini inogona kudzivirirwa neNADA. Imwe-mira mhinduro yako yesimbi yekugadzira zvido
Yako kubvunza kunogona kutaurwa mukati maawa matanhatu. Fast mharidzo kugadzira mukati memazuva manomwe
Isu tinovimbisa mutengo unonzwisisika neepamusoro-magumo mhando. Yakakwana QC system panguva dzese maitiro
Hunhu & anotonga
Tine 3 Quotation Injiniya uye zvakare vane anopfuura makore matanhatu ekushanda ruzivo kune mutengi wekunze. Ivo vanogona kusarudza yakakodzera maitiro kune edu mutengi. Mutengi wedu anogona kuwana kotesheni yedu mukati memazuva maviri.
Yedu Technician Injiniya ane anopfuura makore mashanu echiitiko chebasa, tinogona kuita yepamutemo 2D dhizaini uye 3D dhizaini zvinoenderana nevatengi vedu sampuli uye mazano. Pfungwa yako + DAOHONG = ZVINOGONESESA
Chiedza Chekupisa Kurapa
Sekuziva kwedu mativi esimbi anoshandiswa munyika yedu zvakanyanya. Anenge makore anopfuura gumi ane ruzivo rwezvibereko zvesimbi, yedu R & D timu yakanga yatogadzira yedu yega mhando nevamwe vakagadzirira kupfeka mitsara zvikamu. Sekufambisa zvikamu; TV Wall Wall inokwira; uye standi ...
Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.atamira kunzvimbo itsva muna Ningbo yuyao dunhu kubva August 25, 2020. Iyo nzvimbo yemusangano wedu mutsva yakakura zvikuru kupfuura nakare, uye mamiriro ekushanda ari nani, chakakosha ndechekuti machining edu c ...